हलिवूड अभिनेता विन डिजेलसँग बच्चा समेत बनाउने सपना बुनेकी दिपिका पादुकोणले खोलिन रहस्य – Taja Khawar
हेर्नुहाेस् अाज बढ्यो सुनको मूल्य, कतिले बढ्यो ?
हलिवूड अभिनेता विन डिजेलसँग बच्चा समेत बनाउने सपना बुनेकी दिपिका पादुकोणले खोलिन रहस्य
प्रकाशित मिति: आइतबार, आषाढ २७, २०७८ समय: ०:३४:५१
दीपिका पादुकोण बलिउड अभिनेत्रीहरु मध्ये एक हुन् जसले हलिउडमा पनि काम गरी। उहाँको “एक्स एक्स एक्स : जे’न्डर केज” हलिउड फिल्म जसमा उनलाई हलिवूड अभिनेता विन डिजलसँग देखीएको थियो र त्यस समयमा उनीहरूको अ,फे यरको बारेमा धेरै चर्चा भएको थियो।
फिल्मको रिलीज हुनुभन्दा अघि दीपिका पादुकोणले एक अन्तर्वार्तामा यी हल्लाहरुको बारेमा मौनता तो’ड्दै विन डिजलप्रति आफ्नो प्रेम व्यक्त गरेकि थिइन । यस अन्तर्वार्तामा दीपिकालाई सो’धिएको थियो कि उनलाई यस फिल्मको प्रस्ताव कसरी आयो? त्यसपछि दीपिकाले भनेकी थिइन कि उनले पहिलो चोटि विन डिजलको साथ जब ऑ’डिशन दिएकी थिईन, तब मानिसहरूले उनको के’मिस्ट्रीलाई धेरै मन पराए।
यद्यपि उनले यस फिल्म प्राप्त गरिनन, ३ बर्ष पछि पनि, मानिसहरूले उहाँलाई सम्झे र एक दिन अ’चानक उनलाई फोन आयो र उनलाई हलिउड फिल्मको एक हिस्सा बनाउन चाहेको बताइन ।” त्यसपछि दीपिका टो’रन्टोबाट लस एन्जलस पुगिन । जहाँ उनले विन डिजललाई भेटिन उनलाई थाहा भयो कि उनले फिल्म गरिरहेकी छिन्। त्यतिखेर ती दुबैको तस्वीरहरू प्रकाशमा आए र उनीहरूको सम्बन्धको बारेमा कुराकानी पनि सुरू भयो।
त्यसपछि यस अन्तर्वार्तामा, दीपिकाले भनेकी थिइन कि बिना आगोको धु’वाँ हुँदैन र उनलाई वास्तवमा विन मन पर्दथ्यो तर यो एकतर्फी थियो, केवल उसको दिमागमा। दीपिका चाहन्थिन उनीहरू सँगै बस्न सकून्, खुशी होऊन् र उनको बच्चा होस्।
Last Updated on: July 11th, 2021 at 12:34 am